AUKEY LS02 smartwatch ongororo uye Aircore 15W charger | Gadget Nhau
Nhasi tinotaura newe mu Androidsis nezve zvigadzirwa zviviri zvakasiyana zvakanyanya asi vane chimwe chinhu chakafanana. Ivo vanobva kumugadziri mumwe chete, AUKEY, uye yega yega muchikamu chavo inoedza kupa zvakafanana, chigadzirwa che kuita kwakanaka pamutengo unodhura. AUKEY yatove kupfuura zvakakwana inozivikanwa munzvimbo yehunyanzvi yekupa hombe huwandu hwezvishongedzo uye zvigadzirwa zveiyo smartphone.
Nenguva ino tinotarisa kune vaviri vavo. Takakwanisa kuyedza iyo smartwatch AUKEY LS02 and the chaja wireless Aircore 15W. Zvigadzirwa zviviri zvinosvika pamusika kuve imwezve imwe nzira kune kusingaperi kwemikana yatinowana mumusika.
1 AUKEY uye zvigadzirwa zvayo zviri kune iro basa
2 Iyo LS02 smartwatch
2.1 LS02 smartwatch dhizaini
3 AUKEY LS02 Zvimiro
4 AUKEY Aircore 15W Wireless Chaja
AUKEY uye zvigadzirwa zvayo zviri kune iro basa
Iyo yakasimba AUKEY inoedza kuwana izvo zvese zvavanopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo yakanaka. Isu takaita rombo rakanaka rekuyedza akati wandei zvigadzirwa kubva kumugadziri uyu, uye mune zvese takawana apedza akanaka uye mwero maficha. Nhasi tichataura nezvazvo zvigadzirwa zviviri zvinogovana iyi brand uzivi.
Kana isu tasarudza pane smartwatch isu tinofunga nezve akati wandei maficha. Mutengo, mabhenefiti zvarinopa uye chii dhizaini achitikumbira. Tinogona kutora aya mamiriro akafanana kune chero kutenga. Ndokusaka nhasi isu tichitarisa iyo smartwatch AUKEY LS02 uye pajaja isina waya Aircore 15W.
Iyo LS02 smartwatch
Takatarisana nemhando ye smartwatch inoshanda sezvo iri nenjere. Mudziyo uyo haikwezvi kutariswa nemagadzirirwo ayo kuti uve akadzikama. Inogona kuenda isingazivikanwe pachiuno chako. Asi zvinotipa kuita kukuru uye mashandiro kuti aenzane yemamwe mazhinji mamodheru emitengo yakakwira kwazvo.
LS02 smartwatch dhizaini
Sezvatagara tichikuudza, iyo AUKEY LS02 Iwachi kune avo vasingade kukwezva kutariswa. Iine saizi "yakajairika" haina tambo mumhando kana mavara, asi izvi hazvipesane ne mutete uye wakanaka dhizaini. Iyo smartwatch ine acesimbi hasis ine rectangular chimiro mune grey kusviba kwaunokodzera 1 inch screen.
Mairi Kurudyi inowanikwa bhatani rayo chete remuviri iine akati wandei mashandiro ekushanda kwayo semba, kana pa / kure
In the shure takawana iyo moyo wekutarisa inokwanisa kugadzira zviyero zvinoramba zvichingoitika patinenge tiine paruoko. Zvinokurumidza uye zvakavimbika zviyero, sezvo isu takakwanisa kuenzanisa nemamwe majaira. Chinhu chinobatsira kunyanya kana totaura nezvemitambo zviitiko. Zvakare musana wayo tinowana iyo Magnetic pini ekuchaja bhatiri.
Mubate UKEY LS02 pane iyo yepamutemo webhusaiti ine 10% dhisikaundi
Bhandi ndeimwe yemapfungwa ake akangwara. Yehupamhi zvichienderana nehukuru hwechidzitiro, mu matte nhema. Asi nekubata kunonakidza uye a mhando yepamusoro pamusoro pevhareji kana tichienzanisa nemamwe mamodheru atakakwanisa kuyedza.
AUKEY LS02 Zvimiro
Inguva yekutarisa pane zvese izvo iyo AUKEY LS02 inokwanisa kutipa isu. Tinofanira kugara tichifunga kuti isu takatarisana chigadzirwa chatinogona kufunga nezvehupfumi kana tichienzanisa nemamwe mamodheru. Asi ichi chinhu chinoshanda mukutsigira LS02 kupihwa mabhenefiti ainayo
Kutanga nechiratidziri chako, a TFT pani ine diagonal ye1,4 inches and with 320 x 320 dpi resolution, zvinopfuura zvakakwana saizi iyi. Inotaridzika yakakura kunyangwe mumamiriro ezuva. Zvakare ane kupenya kwemazinga maseru uye isu tinokwanisa kusarudza kusvika pamhando ina dzekupenya. Chinhu chirikushaikwa mune mamwe akawanda majaira.
Nguva ndeimwe yemasimba eAUKEY LS02. Ichaenderana pamwe zvinoshamisa neako smartphone, uye hakuzove nekuzivisa kuti iwe unogona kupotsa. Unogona kugadzirisa smart notices mafoni, verenga mameseji pachiratidziri uye kunyange shandisa iyo zviziviso kubva kune ako aunofarira masocial network.
Un shamwari yakanaka yekuita mutambo wako waunofarira kudzora mimhanzi kutamba kubva pachiuno chako. Imwe yenyaya dzakakosha ndeyekuti iyo AUKEY LS02 inorema zvishoma, hauzoone kuti wakapfeka. Tinowana kusvika pamitambo gumi nembiri yemitambo kuti iwe unogona kuongorora kuti utakure iyo kudzora macalorie ako anodyiwa kana epamberi makiromita. Gadza zvinangwa uye kufambira mberi uye uwane zvinetswa.
Iwe haufanire kunetseka nezve wachi yako ichikuvadzwa nedikita kana kuputika kwemvura. Iyo AUKEY LS02 maficha IP68 certification kuramba guruva nemvura. Inomira tembiricha iri pakati -20º uye 45º. Tenga iyo AUKEY smartwatch izvozvi LS02 ine dhisikaundi pane yayo webhusaiti.
Uye mune chimwe chezvinhu izvo vashandisi vanokoshesa zvakanyanya, iyo hupenyu hwebhatiri, zvakare inoyera. Iyo AUKEY LS02 inopa a kuzvimiririra kwemazuva makumi maviri ekushandisa. Iwe uchakanganwa zvachose kwawakasiya charger yewatchwatch. Pasina mubvunzo, nekuda kwezvikonzero zvakawanda, iyo AUKEY LS02 smartwatch yekufunga nezvayo.
AUKEY Aircore 15W Wireless Chaja
Sezvatakambotaura pakutanga kwenyaya ino, AUKEY inozivikanwa pasi rese neuwandu hwezvigadzirwa zvainogadzira mafoni edu. Uye tinogona kutaura izvozvo kuchaja zvishongedzo zviri pakati pezvakanyanya kugadzirwa uye inotengeswa pasi rose. Mune ino kesi isu tinowana raibha isina waya sezvazvinobatsira sezvazviri.
Tinogona kukuudza zvishoma nezve dhizaini yeraja. Mune ino kesi, ndizvo imwe chaiyo isina waya charger ye fomati yayo uye nemashandisirwo ayo ainopa. Ine denderedzwa chimiro uye iri diki chaizvo saizi uye ukobvu. Iyo inogona kunyatso kuve yedu yenguva dzose charger kunyangwe "kutakura". Inokurumidza, yakasununguka kushandisa uye isingadhuri, zvirokwazvo inonakidza sarudzo. Tenga izvozvi pane iyo AUKEY webhusaiti mutengo wakanakisa.
AUKEY inotisvitsa zano idzva remagineti isina waya charger. Iyo Aircore 15W iri zvakajeka rakafuridzirwa nechaja itsva yakagadzirirwa neApple yeiyo iPhone 12, inonzi MagSafe. Kwete chete isu zvatinogona kuchaja mafoni edu anoenderana neisina waya kuchaja nayo Zvakare Tinogona kuishandisa apo bhatiri iri kuchaja nekuibata pakati pemaoko edu pasina charger ichibvisa.
Ane Qi isina waya inokurumidza kuchaja certification kusvika 15W. Tinogona kubhadharisa chero inoenderana kifaa senge mafoni, mahedhifoni kana smartwatches. Kunze kwezvo, zvake 1,2 metres kureba, USB Type-C fomati tambo, inoita kuti mashandisiro ayo asagadzikane isu patinenge tavhara mumagetsi kana chimwe chiteshi checomputer yedu.
Kana iwe watove wafunga kutenga isina waya charger, tora iyo AUKEY Aircore 15W pano pane yako webhusaiti uye unakirwe neyakareruka kuishandisa.
Iyo Aircore 15W charger inoratidza iyo potente magnetic nzvimbo inobata chishandiso ichirega kuisiya kunyangwe tikazvifambisa kana kuzvibata mumaoko edu. Zvakakosha shanduko kubva kumataja ekutanga asina waya naani, sekutaura kwatakaita, taifanira kusiya mafoni edu tisingakwanise kuashandisa.
Chinhu chakakosha kuchengeta mupfungwa ndechekuti hatigoni kuwana adapter yemagetsi mubhokisi rejaja. Uye isu tinofanira kuziva izvozvo saka kuti iyo Aircore inoshanda izere chinzvimbo uye usvike pakumhanya kwazvo kumhanya, 15W tichada network adapter pakati pe18W kana 20W.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Kuongorora kweAUKEY LS02 smartwatch uye Aircore 15W charger